"Maynkraft" मा तैयार चारा रूपमा: बयान
आज हामी चारा "Maynkraft" भनिन्छ खेलमा तैयार रूपमा संग थाहा छ। यो प्रश्न धेरै खेलाडीहरू, विशेष गरी शुरुआती गर्न चासो छ। वास्तवमा, यो त गाह्रो छ। बस खेल संसारमा केही स्रोतहरू भेला र तिनीहरूलाई सँगै संयोजन गर्न पर्याप्त। त्यसैले के उपयोगी छ? रूपमा तैयार "Maynkraft" मा ठहराव?
हामी आज को विचार लागू गर्न आवश्यक छ कि पहिलो स्रोत - यो sticks। सायद, यो वस्तु भन्दा खेल भर्चुअल संसारमा सामान्य छ। र यो यति गाह्रो छैन प्राप्त गर्न।
तैयार चारा रूपमा? यो उद्देश्य लागि, "Maynkraft" तपाईं छडी खोज्न आवश्यक छ। सबै3टुक्रा मा एक उत्पादनको लागि आफ्नो आवश्यकता। बारी मा, स्वतन्त्र यो स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस पीठ मा यो उद्देश्य लागि दुई बोर्डहरू संयोजन गर्नुपर्छ। कुनै कुरा के, तपाईं कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कि, सुरुमा, तपाईं6बोर्डहरू लिन र सङ्कलन तिनीहरूलाई को3पीठ मा रहन आवश्यक तैयार चारा कसरी को प्रश्नको जवाफ छ। तपाईं त अन्य स्रोतहरू खोज्न अगाडि बढ्न सक्छ।
एक खेलाडी थप के आवश्यक सकिन्छ? इमानदार, छैन त धेरै हुन। वास्तवमा, लाठी बाहेक खेल संसार मुद्दा मा प्राप्त गर्न छ। यी खेल वस्तुहरु खेल "Maynkraft" मा तैयार चारा रूपमा बुझे गर्न सकिन्छ।
सूत्रहरू2टुक्रा को मात्रा मा आवश्यक हुनेछ। यस मामला मा, आफ्नै सिर्जना गर्न भनेर लाठी जस्तै, तपाईं गर्न सक्छन् मनमा राख्नुहोस्। खजाना चेस्ट मात्र फेला पार्न (उनीहरू त्यहाँ लगभग4टुक्रा छन्), साथै खन्न गर्न को त्यागेर बारुद वेब को। वा स्रोत राक्षस हत्या पछि दिइएको हुन सक्छ। यस मामला मा, तपाईं spiders लागि शिकार गर्न आवश्यक छ। हत्या पछि, तपाईं एक साथ मुद्दा को2skeins सम्म प्राप्त हुनेछ।
तैयार चारा रूपमा? workbench संग मुद्दा2र3लाठी मर्ज। भयो! अब तपाईं एक माछा मार्ने यात्रा मा जान सक्नुहुन्छ! तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, केही प्रक्रिया बारे गाह्रो वा असामान्य। तर सबै छ। "Maynkraft" मा एक गाजर एक छडी छ। एकदम उपयोगी वस्तु। र त तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न कसरी ठ्याक्कै थाहा हुनुपर्छ।
गाजर संग ग्याँसचुलोबिना
एक गाजर संग Kraft छड कस्तो छ? केही विशेष वा यसको बारेमा कठिन। सबै को पहिलो बस चारा गर्न आवश्यक छ। कसरी ठीक? हामीले देख्यौं, यो गर्न, यो3लाठी र workbench मा संयुक्त छन्2लाइनहरु सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। के अर्को छ?
अब, यो अनुमान गर्न गाह्रो छ, यो गाजर प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो बगैचा मा हुर्केका गर्न सकिन्छ। गाजर पनि गाउँमा खोजे। वा यो मोब्स एक अत्यन्तै अभाव स्रोत मा चयन गरिएको छ। सामान्य मा, कुनै पनि विधि तरकारी प्राप्त।
उहाँले पीठ मा हुनेछ रूपमा बित्तिकै ग्याँसचुलोबिना र गाजर को एक टुक्रा संयोजन। थप केही तपाईं को आवश्यक छ। त्यसपछि यसको अभिप्रेत उद्देश्य लागि गाजर एउटा बल्छी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो केही जनावरहरू को domestication लागि ठूलो आकर्षण छ।
अब म कसरी खेल तैयार चारा "Maynkraft" बुझ्छु। यो त गाह्रो छैन, हेर्नुहोस्। मुख्य कुरा - यी वा अन्य स्रोतहरू उत्पादन कहाँ र कुन परिमाणमा थाहा। ग्याँसचुलोबिना - यो सम्पूर्ण खेल संसार "Maynkrafta" मा सजिलो कुरा को एक हो। तर यो दुवै अत्यन्तै उपयोगी छ। सादा वा गाजर - र अब हामी माछा मार्ने छड विभिन्न प्रकारका सिर्जना गर्न सक्षम छन्।
लोकप्रिय शूटर खेल मा उद्देश्य के हो?
चेतावनी यातायात नियमहरु को संकेत। यातायात संकेत र व्याख्या र टिप्पणी आफ्नो विवरण चेतावनी। चेतावनी संकेत के हो?
आफ्नो घर जोगाउन पनरोक स्प्रे।
ओस्लोमा आकर्षण: यो हेर्न लायक छ
एरिक Dzhonson: अभिनय क्यारियर
Dmitriy Krikun - एक लोकप्रिय फोटोग्राफर र ब्लगर
स्कूलमा र बाल सदन मा सल्लाह सिकाउन: संगठन, तयारी, आचरण, उद्देश्य, उद्देश्य, विकास प्रकारका
प्रशासनिक स्रोतहरू - यो र कसरी व्यापार र राजनीतिमा यसको प्रयोग गर्न के हो?